श्री पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन् ; माताको दर्शन् गर्दै हे’र्नुहोस् वि. स. २०७८ साल बैशाख १ गते बुधबारको राशि’फल : – Sadhaiko Khabar
श्री पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन् ; माताको दर्शन् गर्दै हे’र्नुहोस् वि. स. २०७८ साल बैशाख १ गते बुधबारको राशि’फल :
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ३१, २०७७ समय: २१:१०:२४
आज २०७८ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल बैशाख १ गते बुधबार इश्वी सन २०२१ अप्रिल १४ तारीख चैत्र शुक्लपक्ष द्वितिया तिथी भरुणी नक्षत्र प्रीति योग तैतिल करण चन्द्रमां मेष राशिमा आनन्दादि योगमा काण योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं बसन्त ऋतु नववर्षारम्भ,वैशाख सङ्क्रान्ति, भ.पु.विश्वध्वजपातन, मत्स्यजयन्ती मत्स्य नारायणमेला, टोखा सपन तीर्थस्नान, काठमाडौं चम्पादेवीमेला खायु सन्हु ( ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) परीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस हुनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सामान्य तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरु बाट धो’का हुन सक्नेछ । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । प्रतिस्पर्धाजन्य कार्यका क्षेत्रमा तपाईको अब्बल स्थान प्राप्त रहनेछ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतीको समय रहेको छ । पुराना लगानि उठाउन समयले बिशेष साथ दिनेछ । अध्यन अध्यापनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । मित्रजनहरु सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहनेछ । आर्थिक क्षेत्र सवल रहनेछ । आफु भन्दा सानाको सहयोगले गरीएका कार्यहरु फाईदा जनक रहनेछ ।
मिथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । नेतृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गरेतापनि ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नाले दिगो आर्थिक लाभको बाटो बन्न सक्नेछ ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) साथि भाई हरुको खराब संगतका कारण सामान्य अपजस आई पर्नेछ । साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । अर्काको खुशीको लागी अनावश्यक समय र धन ब्यय गर्नु पर्नेछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । जिवनसाथीको साथ सहयोग द्वारा आम्दानी क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ । परोपकार तथा ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । कार्य क्षेत्रको लापरबाहीले सामान्य झन्झट आईपर्ला । कार्यको बेवास्ताले मान्यजनलाई ठेश पुग्नेछ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) प्रतिपक्षीहरु सबलरहनाले कार्यक्षेत्रमा साबधानिरहनु होला । कुरा का’ट्ने ब्यक्तिको कमि नरहला । बोल्दा सजग रहनु होला बोलिको कारण नजिकका मित्रजन रुष्ट रहन सक्छन । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) नयाँ कार्यको थालनिलाई नयाँ योजनाको आवश्यक पन्र्न सक्ला । सामान्य चुनौति पस्चात आम्दानि राम्रो रहनेछ । बौधिक ब्यतित्व हरुको साथ प्राप्त हुनेछ । बिद्या प्राप्ति योग रहेको छ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । चाँडो क्रो’धको सि’कार भईनेछ सजग रहनु होला । पारीवारिक समस्याले सताउन सक्छ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) परिस्थितीसँग जुध्ने क्षमतामा बृद्धि हुनाले कार्य सफल रहनेछ । सभा सम्मेलनमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । पारीवारिक मेलमिलाप बढे ता पनि दाम्पत्य सुखमा बा’धा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुने योग रहेको छ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) नयाँ लगानिको क्षेत्रमा समय राम्रो छैन सजग रहनु होला । बाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन । सामान्य चोटपटकको शि’कार भईन सक्छ । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । लापरबाहीले धनमालको क्षति ब्यर्होनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) साझेदारी कार्यको क्षेत्रमा अघि नबढेको नै राम्रो हुनेछ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ती आँट र साहशको कमि आउनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबी देखा पर्नेछ । अरुको कार्य सम्पादन मा प्रेरणाको स्रोत बन्न सकिएला ।